MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha maamulka HirShabeelle, Maxamed Cabdi Waare, ayaa shaaciyay maanta oo Arbaco ah shaaciyay inuu heshiis la galay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, xilli maamullada kale ay go'aankooda ku adkaysanayaan.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id uu ku qabtey Muqdisho, ayuu ku shaaciyay go'aankiisa, isagoo xusay in maamulkiisa iyo Villa Soomaaliya ay ka heshiiyeen mad-madowgii iyo khilaafkii soo kala dhex-galay, kadib wadahadal uu la yeeshay madaxda DFS.
Waare ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay wadahadal la gasho maamullada kale, kuwaasoo wali ku adkaysanaya go'aankoodii ahaa inaysan wax xiriir ah la sameynin Villa Somalia illaa laga xalinayo tabashooyinkooda ay soo jeediyeen.
Madaxweynaha ma uusan shaacin qodobada heshiiska laga gaarey, balse warar ayaa sheegaya in arrimo ku saabsan in laga joojiyo mooshinka isaga ku foorara iyo in kacdoonka siyaasadeed ee uga kacsan gudaha maamulkiisa, gaar ahaan Baarlamaanka.
Hadalka Waare ayaa muujinaya inuu ka baxay go'aankii Gollaha Iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku gaareen Kismaayo 8-dii bishan, kadib shir socda 4 maalmood oo halkaasi ku yeesheen, iyagoo si kukul u dhaliilay siyaasada dowladda Federaalka.
Heshiiska HirShabeelle iyo dowladda Federaalka ayaa yimid kadib markii Madaxweyne Waare dhawaan shir jaraa'id oo uu ku qabtey Muqdisho uu eedeymo culus ugu jeediyay Xukuumadda Soomaaliya, isagoo xusay in amaanka ay ku fashilantay.
Lama oga in madax kale ee dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay qaadi doonaan tallaabada Waare oo kale iyo inay ku adkeysan doonan go'aankoodii hore ee xiriirka ugu jareen Villa Somalia.
HALKA KA AKHRISO WAR-SAXAAFADEEDKA WAARE:
HirShabeelle ayaa ka socda dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo ay wadaan Xildhibaano doonaya...
CC Shakuur oo si adag u dhaliilay heshiiska DFS iyo HirShabeelle
Soomaliya 20.09.2018. 10:33
Madaxda Maamul Goboleedyada oo eedeyn culus u jeediyay Farmaajo
War Saxaafaded 18.09.2018. 11:13